Saw Aye Chan Maung အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Saw Aye Chan Maung အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၁၄:၁၁၊ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၄‎ အိမ်ထောင်သည်လောက (ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ) ‎ →‎အိမ်ထောင်သည်လောက (ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ) လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၄:၀၅၊ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၅‎ ရိုဝန်း ‎ →‎Filmography: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၀:၁၀၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်များ ‎ စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၉:၃၅၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၃‎ အသုံးပြုသူ:Saw Aye Chan Maung ‎ လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၉:၁၅၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၈‎ အသုံးပြုသူ:Saw Aye Chan Maung ‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၈:၅၇၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၉‎ အသုံးပြုသူ:Saw Aye Chan Maung ‎ စာတွဲ: ၂၀၁၇ ရင်းမြစ်တည်းဖြတ်
၀၈:၅၅၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁၀၀‎ အသုံးပြုသူ:Saw Aye Chan Maung ‎ စာတွဲ: ၂၀၁၇ ရင်းမြစ်တည်းဖြတ်
၀၈:၄၁၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂၉‎ ဂျိုဝယ်လ် အဒမ်စ် ‎ →‎Singles လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၈:၃၉၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၆၄၈‎ ဂျိုဝယ်လ် အဒမ်စ် ‎ →‎The X Factor 2012 ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းနှင့် "Please Don't Go" သီချင်း စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၈:၂၆၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉၇၄‎ ဂျိုဝယ်လ် အဒမ်စ် ‎ စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည်, သဒ္ဒါပြင်ခဲ့သည်, လင့်ခ်များပေါင်းထည့်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၈:၁၅၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၀‎ အသစ် ဂျိုဝယ် အဒမ်စ် ‎ ဂျိုဝယ် အဒမ်စ် စာမျက်နှာကို ဂျိုဝယ်လ် အဒမ်စ် သို့ Saw Aye Chan Maungက ရွှေ့ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၀၈:၁၅၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဂျိုဝယ်လ် အဒမ်စ် ‎ ဂျိုဝယ် အဒမ်စ် စာမျက်နှာကို ဂျိုဝယ်လ် အဒမ်စ် သို့ Saw Aye Chan Maungက ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၈:၁၄၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁၄‎ အရေးမကြီး ဂျိုဝယ်လ် အဒမ်စ် ‎ Jo - ဂျို၊ el - ဝယ်လ် စာတွဲ: ၂၀၁၇ ရင်းမြစ်တည်းဖြတ်
၀၈:၀၉၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၄‎ အသစ် ဂျိုအယ် အဒမ်စ် ‎ ဂျိုအယ် အဒမ်စ် စာမျက်နှာကို ဂျိုဝယ် အဒမ်စ် သို့ Saw Aye Chan Maungက ရွှေ့ခဲ့သည် စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၀၈:၀၉၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဂျိုဝယ်လ် အဒမ်စ် ‎ ဂျိုအယ် အဒမ်စ် စာမျက်နှာကို ဂျိုဝယ် အဒမ်စ် သို့ Saw Aye Chan Maungက ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၅:၂၉၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ ရိုဝန်း ‎ စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၇:၃၅၊ ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂‎ အယ်လ် (တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်) ‎ လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၇:၃၄၊ ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၀၉‎ အယ်လ် (တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်) ‎ →‎ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၇:၃၂၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ကက်သလစ် အသင်းတော် ‎ စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည်, သဒ္ဒါပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၇:၃၁၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ကက်သလစ် အသင်းတော် ‎ စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၃:၀၀၊ ၁၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၄‎ ကက်သလစ် အသင်းတော် ‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၂:၅၆၊ ၁၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၄‎ ကက်သလစ် အသင်းတော် ‎ စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၂:၅၅၊ ၁၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၂၄၈၃‎ ကက်သလစ် အသင်းတော် ‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၂:၃၄၊ ၁၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၃‎ အသစ် ရိုမန်ကတ်သလစ် ‎ ရိုမန်ကတ်သလစ် စာမျက်နှာကို ကက်သလစ် အသင်းတော် သို့ Saw Aye Chan Maungက ရွှေ့ခဲ့သည်: Based on modern usage in Myanmar Catholic Churches. လက်ရှိ စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၀၂:၃၄၊ ၁၁ ဇွန် ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ကက်သလစ် အသင်းတော် ‎ ရိုမန်ကတ်သလစ် စာမျက်နှာကို ကက်သလစ် အသင်းတော် သို့ Saw Aye Chan Maungက ရွှေ့ခဲ့သည်: Based on modern usage in Myanmar Catholic Churches.
၀၉:၁၆၊ ၂၁ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၉‎ အိမ်ထောင်သည်လောက (ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ) ‎ →‎ဇာတ်ရံ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၉:၁၆၊ ၂၁ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ →‎ဇာတ်ရံများ: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၁:၁၅၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂၅‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ →‎ကိုးကား စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၁:၀၉၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၁၄‎ အယ်လ် (တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်) ‎ →‎ဆုများနှင့် ဆန်ကာတင်များ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၁:၀၄၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၉‎ အယ်လ် (တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်) ‎ →‎၂၀၁၇-လက်ရှိ: လူသိများထင်ရှားလာခြင်း စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၁:၀၀၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ →‎ဆုများနှင့် ဆန်ကာတန်များ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၀:၅၉၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ →‎ပြင်ပလင်ခ်များ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၀:၅၈၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၄၄‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ →‎မှတ်စုများ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၀:၅၄၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၉၇‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ →‎ဆုများနှင့် ဆန်ကာတန်မျာစ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၀:၅၀၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၈၈‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ →‎Awards and nominations စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၀:၄၄၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၅၅၇‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ →‎Ratings စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၀:၄၃၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၂၂‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ →‎Ratings စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၀:၃၅၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၇၉၆‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ →‎ထုတ်လုပ်ရေး စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၀:၁၁၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၄၆‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၀:၁၀၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၀၁၈‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၉:၅၇၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၀၈၅‎ နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၉:၄၂၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁၇၈‎ အသစ် နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် ‎ "နတ်သားလေးရဲ့ န..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည် စာတွဲ: ၂၀၁၇ ရင်းမြစ်တည်းဖြတ်
၀၇:၁၇၊ ၁၈ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၇‎ အယ်လ် (တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်) ‎ စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၀၆:၅၀၊ ၁၈ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၉၅‎ ရိုဝန်း ‎ →‎ကိုးကား စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၃:၄၈၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၁၆‎ ရိုဝန်း ‎ →‎ဆုများနှင့် ဆန်ကာတင်များ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၃:၃၇၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂၂‎ ရိုဝန်း ‎ →‎ကိုးကား စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၃:၃၂၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ရိုဝန်း ‎ →‎Reality shows စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၃:၃၁၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၁၅‎ ရိုဝန်း ‎ →‎ရုပ်ရှင်များ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၃:၂၉၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၅၂‎ ရိုဝန်း ‎ →‎၂၀၁၇-လက်ရှိ: တစ်ကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှုများ၊ လူသိများထင်ရှားလာခြင်း စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
၁၃:၂၉၊ ၁၇ မေ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၀၂‎ ရိုဝန်း ‎ →‎၂၀၁၇-လက်ရှိ: တစ်ကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှုများ၊ လူသိများထင်ရှားလာခြင်း စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
Saw Aye Chan Maung: စာမျက်နှာခွဲများ
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/Saw_Aye_Chan_Maung" မှ ရယူရန်